सर्ने रोग Archives – healthykhabar.com
सुनसरी,१२ मंसिर । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना भाइरस परिक्षणका लागी नयाँ पीसीआर मेसिन जडान गरिएको छ ।रोटरी क्लब विराटनगर र रोटरी इन्टरनेसनल अमेरिकाको सहयोगमा प्रतिष्ठानको माइक्रोबायोलोजी विभागको प्रयोगशालामा मेसिन जडान गरिएको हो । प्रतिष्ठानमा अब तीनवटा पीसीआर मेसिन भएका छन् । माइक्रोबायोलोजी विभागका एडिसनल प्रोफेसर प्रा.डा. नारायण भट्टराईका अनुसार नयाँ मेसिनले प्रतिघण्टा एकसाथ ९० नमुना परीक्षण गर्न सक्छ । अमेरिकाको एज्युर कम्पनीले तयार गरेको उक्त मेसिनको बजार मूल्य करिब ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ‘हामीसँग भएका पीसीआर मेसिनमध्ये एउटा पुरानो हो, बाँकी नयाँ हुन्  । बिहीबारै धरान उपमहानगरपालिकाले ८ केभी क्षमताको वासिङ मेसिन प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौ,१२ मंसिर । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार चार सय नाघेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा २३ जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार चार सय १२ पुगेको छ । त्यस्तै, बिहीबार एक हजार ६ सय १४ जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन् । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दुई लाख २७ हजार ६ सय ४० पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं,११ मंसिर । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यको कोरोना संक्रमण बाट निधन भएको छ। उहाँको भैसेपाटिस्थित मेडिसीटी अस्पतालमा निधन भएको हो। उहाँ नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत हुनुहुन्थ्यो । डा. शाक्य २०७० जेठमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो।
४०८ जना कोरोना संक्रमितको आइसियुु र भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै
काठमाडौं,मंसिर १० । बुधबार देशभर ४०८ जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६३ जना भेन्टिलेटरमा र ३४५ जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३६ जना आइसियु र ४१ जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन. । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ जना आइसियु र ३ जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश १ मा ३२ जना आइसियु र ८ जना भेन्टिलेटरमा र प्रदेश २ मा ८ आइसियुमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुदुरपश्चिममा ८ आइसियु, गण्डकी प्रदेशमा ८६ आइसियु र ११ जना भेन्टिलेटरमा र कर्णाली प्रदेशमा १२ आइसियु उपचाररत रहेका छन्।
बुधबार काठमाडौं उपत्यकामा ८३५ संक्रमित थपिए
काठमाडौं,१० मंसिर । काठमाडौं उपत्यकामा ८३५ जना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ३५० पुरुष र ४८५ महिला गरी ८३५ जना कोरोना संक्रमित भएका हुन् । योसँगै उपत्यकामा एक लाख ५ हजार ५१७ जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६३५ , ललितपुरमा ११३ र भक्तपुरमा ८७ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी, काठमाडौंमा ४, ललितपुर र भक्तपुरमा दुई÷दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म काठमडौंमा मात्र ८५ हजार १५२ जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये ३३५ जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या ७७ हजार १५७ छ।
थप १९४८ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं,१० मंसिर । बुधबार नेपालमा एक हजार ९४८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २ लाख २६ हजार २६ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३ हजार १ सय ४० जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ७ हजार ९९८ पुगेको छ। आज देशभर १६ हजार ६ सय ३९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभर २८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८९ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा ९ हजार २१० जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ।
काठमाडौं,१० मंसिर । बुधबार नेपालमा थप २८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज मृत्यु भएका संक्रमित सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने कुल संख्या १३८९ पुगेको छ । यस्तै आज थप एक हजार ९ सय ४८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यो संगै नेपालमा संक्रमितको संख्या दुईलाख २६ हजार २६ पुगेको छ। गत २४ घण्टामा ९ हजार २ सय १० जनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा पिसिआर परीक्षण हुनेको संख्या १६ लाख ९० हजार ५ सय ९ जना पुगेको छ। हाल ६ सय ६९ जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
४५० संक्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा
काठमाडौं,९ मंसिर । मंगलबार देशभर ४५० जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालको आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ५७ जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा र ३९३ जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा रहेका संक्रमितको संख्या सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १४९ जना छन् । यस्तै भेन्टिलेटरमा ४० जना उपचाररत छन् । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ जना आइसियु र २ जना भेन्टिलेटरमा, प्रदेश १ मा ५२ जना आइसियु र ७ जना भेन्टिलेटरमा र प्रदेश २ मा १० आइसियुमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सुदुरपश्चिममा ६ आइसियु, गण्डकी प्रदेशमा १०२ आइसियु र ८ जना भेन्टिलेटरमा र कर्णाली प्रदेशमा ११ आइसियु उपचाररत रहेका छन्।
१३६१ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
काठमाडौ,९ मंसिर । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एकहजार ३६१ पुगेको छ । आज थप २४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या १ हजार ३६१ पुगेको छ। आज देशभर १ हजार ७ सय ९० जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै संक्रमितको कुल संख्या २ लाख २४ हजार ७८ पुगेको छ। २४ घण्टामा २ हजार १९१ जना डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ लाख ४ हजार ८५८ पुगेको छ। आज देशभर १७ हजार ६५९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं,९ मंसिर । मंगलबार देशभर एक हजार ७९० जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो सहित कुल संक्रमितको संख्या २ लाख २४ हजार ७८ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर २ हजार ७ सय ९१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ४ हजार ५८ पुगेको छ। आज देशभर १७ हजार ८ सय ५९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभर २४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ६१ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ९४७ संक्रमित
काठमाडौं,मंसिर ९ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ९४७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै उपत्यकामा एक लाख ४ हजार ६८२ जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ६९२, ललितपुरमा १९० र भक्तपुरमा ६५ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौंमा ७ हजार ७४४, ललितपुरमा १ हजार ५८९ र भक्तपुरमा ६०८ जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज देशभर १ हजार ७९० जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। योसँगै संक्रमितको कूल संख्या २ लाख २४ हजार ७८ पुगेको छ। २४ घण्टामा २ हजार १९१ जना डिस्चार्ज भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ लाख ४ हजार ८५८ पुगेको छ। आज देशभर १७ हजार ६५९ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा २४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या १ हजार ३६१ पुगेको छ।
उपत्यकामा थपिए १६३० जना कोरोना संक्रमित
काठमाडौं,१७ कार्तिक । आज काठमाडौं उपत्यकामा एक हजार ६३० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज थपिएका २ हजार ९३३ मध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १ हजार ६३० जना थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १ हजार ३२९, भक्तपुरमा १०८ र ललितपुरमा १९३ जना संक्रमित भेटिएका हुन्। योसँगै काठमाडौंमा ६४ हजार ५ सय ४६, भक्तपुरमा ५ हजार ९०३ र ललितपुरमा ९ हजार १५१ जना संक्रमित पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौंमा २ सय ४३, भक्तपुरमा ६७ र ललितपुरमा ६३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
थप दुई हजार ९३३ संक्रमित थपिए
काठमाडौं,१७ कार्तिक । देशभर थप दुइ हजार ९३३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो संगै कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख ७६ हजार ५०० पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३ हजार १५० जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। योसँगै हालसम्म १ लाख ३७ हजार ९९२ पुगेको छ। आज देशभर ३७ हजार ५२४ जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज देशभर २४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ९८४ पुगेको छ।